Vanhu Vanoda Kusvika Mamiriyoni Zana Vange Vatovhota Musarudzo dzemuAmerica Vakawanda neKutya Covid-19
Mbudzi 03, 2020
Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 96 million vakatovhota kare musarudzo dzemuAmerica sezvo matunhu akawanda achibvumidza kuti vanhu vavhote vachiita zvekutumira vhoti yavo kana kuti mail in ballot kuitira kurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 uye kune vamwe vakaita semauto vanenge vari kunze kenyika. Vamwe vanokwanisawo kukurumidza kunovhota zuva rakatarwa risati rasvika.
Musi wa 3 Mbudzi kana kwapera makore mana ndiwo zuva rekuvhota riri pamutemo.
Mumwe wevakatovhota kare musarudzo idzi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland VaTaka Kapikinyu vanoti mushure mekuvhota vakaziviswa kuti vhoti yavo yainge yatambirwa yangomirirwa kuitwa.
Hurukuro naVaTaka Kapikinyu
Vari kwikwidzana gore rino mutungamiri wenyika VaDonald Trump vebato remaRepublicans uye VaJoe Biden vebato remaDemocrats.
Kunze kwekuti ndiyani achange otungamira nyika yeAmerica, pane dzimwe sarudzo dzakakosha zvikuru mumatongerwo enyika dzinova dzedare reSenate.
Parizvino bato remaRepublicans ndiro rine nhengo dzakawanda dzinosvika makumi mashanu nematatu kana kuti 53. MaDemocrats ane nhengo makumi mana nenomwe kana kuti 47. Rwendo rwuno matunhu makumi matatu nemashanu ndiwo ari kuita sarudzo dzesenate sezvo dzisingaitwe panguva imwechete.
Asi kana mapato maviri aya akakwanisa ose kuwana zvigaro makumi mashanu kana kuti 50-50 zvinoreva kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ndiye anenge aine vhoti yakakosha nekudaro ndokusaka paine makwikwi akasimba pakati paVaTrump naVaBiden.
Rimwe dunhu rakakosha musarudzo idzi ndereNorth Carolina. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu iri VaEsau Mavindidze vanova zvekare mutungamiri werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, reZimbabwe Diaspora Network North America vanoti kunyangwe dunhu ravo rakarerekera kumaDemocrats rwendo rwuno, zviri kuratidza kuti pane makwikwi akasimba pakati paVaBiden naVaTrump.
VaBiti Voshora VaMnangagwa NeKudzinga Vanhu kuChilonga Vachipa Muchena Purazi
Malaria Youraya Vanhu Vakawanda Kunyangwe Vazhinji Vari Kungotaura ZveCovid-19
Zimbabwe Warriors Yotatarika Kuunganidza Chikwata cheMitambo yeAfrica Nations Cup
Covid-19 Yopa Kuti Madzimai Kunyanya Anonge Svosve neMuromo
Zimbabwe Yobatana neDzimwe Nyika Kucherechedza Zuva reMadzimai